निर्मला हराएपछि तारो बनेको त्यो दुई तल्ले घर (#WhoKilledNirmala शृङ्खला ६) :: PahiloPost
निर्मला हराएपछि तारो बनेको त्यो दुई तल्ले घर (#WhoKilledNirmala शृङ्खला ६) को लागी ६ प्रतिक्रिया(हरु)
raman [ 2018-11-30 15:12:51 ]
Nirmala le nyaya pauna satta parivartan hunua parchha.
Gaurav [ 2018-11-30 13:37:21 ]
ह्युरोन माग्ने संगठन हो । विदेशीको सिधाबाट चलेको संस्थालाई पैसासँग मात्र मतलब छ । यो संगठनले पैसा खाएर झुठो प्रतिवेदन पेस गरेको हुन सक्छ ।
त्रिचन्द्र प्रतीक्षा [ 2018-11-30 00:14:58 ]
घरमा उनका छोरीहरु रोशनी आँचल र बबिता मात्रै बस्थे। निर्मलाकी साथी रोशनी १८ वर्षकी छिन् भने उनकी दिदी बबिता अझै जवान भइसकेकी छिन्।
यो वाक्यले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट नभएजस्तो लाग्यो ।
RS [ 2018-11-29 21:38:57 ]
अाजको अंकले अांखा रसायो । यदि यो अंकाका हरेक शव्द, हरफ शहि हुन भने , वम परिवार माथीको राष्ट्रिय अत्याचारको क्षतिपूर्ति के ? नेपाल मानव अधिकार संगठन माथी कार्वाहि किन नहुने ? उसको नियत के हो? अनुसन्धान यो सवै अफवाहको रचनाकार को हो त्यस तर्फ जानु पर्ने पो देखियो । कतै अफवाहका रचनाकारले पो हत्यार लुकाउदै छ कि??? पुन यदि यो अंकाका हरेक शव्द, हरफ शहि हुन भने नेपालको मिडियाले ठूलो मु्ल्य चुकाउनु पर्छ । फ्रन्ट पेजमा वम परिवारको फोटो राखी माफी माग्नु पर्छ ।
Siddhanjan [ 2018-11-29 21:17:17 ]
Tyo chakra badu laai pakkai kehi na kehi ta thaha hunu parchha....
RS [ 2018-11-29 21:09:27 ]